နိုဝင်ဘာလမှာရုံတင်တော့မယ့် မဲဆိုင်ဂူဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
နိုဝင်ဘာလမှာရုံတင်တော့မယ့် မဲဆိုင်ဂူဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
October 8, 20190117
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာကတော့ ထိုင်းလူမျိုး အသက် ၁၁ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်အထိရှိတဲ့ ဘောလုံးကစားသမားလေး ၁၂ ယောက်နဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် သူတို့ရဲ့နည်းပြတစ်ဦးတို့ဟာ မဲဆိုင်ဂူထဲကို ဇွန်လ ၂၈ရက်မှာ ဝင်သွားခဲ့တဲ့နောက် မိုးတွေသည်းထန်စွာရွာခဲ့တာကြောင့် ဂူထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်အဖြစ် ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo : The Cave Fb
တစ်ပတ်ကျော်ကြာ အပြင်နဲ့လည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့ပြီး ဂူထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ သူတို့တွေကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေက နိုင်ငံခြားက ကျွမ်းကျင်ရေငုပ်သမားတွေကိုပါ အကူအညီတောင်းယူခဲ့ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရိုက်ခတ်သွားစေခဲ့ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး The Cave ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်နဲ့ မကြာခင်မှာ ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ The Cave ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Source : The Cave Fb
ပှီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစြ ဇှနလြမှာတော့ တစကြမျဘာလုံးကို လှုပခြတသြှားစတေဲ့ အကှောငြးအရာတစခြု ထိုငြးနိုငငြံမှာ ဖှစပြှားခဲ့ပါတယြ။ အဲဒီအကှောငြးအရာကတော့ ထိုငြးလူမွိုး အသကြ ၁၁ နှစကြနေ ၁၆ နှစအြထိရှိတဲ့ ဘောလုံးကစားသမားလေး ၁၂ ယောကနြဲ့ အသကြ ၂၅ နှစအြရှယြ သူတို့ရဲ့နညြးပှတစြဦးတို့ဟာ မဲဆိုငဂြူထဲကို ဇှနလြ ၂၈ရကမြှာ ဝငသြှားခဲ့တဲ့နောကြ မိုးတှသညြေးထနစြှာရှာခဲ့တာကှောငြ့ ဂူထဲမှာ ပွောကဆြုံးသှားတယဆြိုတဲ့ သတငြးဖှစပြါတယြ။ ဒီအကှောငြးကိုတော့ ဖှစရြပမြှနရြုပရြှငအြဖှစြ ယခုနှစြ နိုဝငဘြာလမှာ ရုံတငပြှသတော့မှာဖှစပြါတယြ။
တစပြတကြွောကြှာ အပှငနြဲ့လညြး အဆကအြသှယပြှတနြခေဲ့ပှီး ဂူထဲမှာ ပိတမြိနခေဲ့တဲ့ သူတို့တှကေိုတော့ ထိုငြးနိုငငြံကတာဝနရြှိသူတှကေ နိုငငြံခှားက ကွှမြးကငွရြငေုပသြမားတှကေိုပါ အကူအညီတောငြးယူခဲ့ပှီး ခကခြကခြဲခဲ ကယထြုတခြဲ့တာဖှစပြါတယြ။
တစကြမျဘာလုံးရိုကခြတသြှားစခေဲ့ပှီး စိတဝြငစြားမှုတှရရှေိခဲ့တဲ့အကှောငြးကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစြ နိုဝငဘြာလမှာ စတငရြိုကကြူးခဲ့ပှီး The Cave ဆိုတဲ့ ရုပရြှငကြားအဖှစနြဲ့ မကှာခငမြှာ ကှညြ့ရတော့မှာဖှစပြါတယြ။ The Cave ရုပရြှငကြားကိုတော့ နိုဝငဘြာလ ၂၈ ရကနြမှေ့ာ စတငပြှသတော့မှာဖှစပြါတယြ။
အဖွဲ့တရားဝင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Rose Quartz တို့အကြောင်း….
ချစ်သူအပေါ် အပြုအစုကောင်းတဲ့ ချိန်ဘာလိန်ရဲ့ အသည်းကျော်လေးပုံရိပ်….